Degmada Boodalay Ee Deegaanka Dulqabaw, Degmada Horshagax Ee Deegaanka Ilo, Degmada Koonfurta Jigjiga iyo Degmada Waqooyiga Jigjiga Oo Faah-faahin Laga Bixiyay - Cakaara News
Degmada Boodalay Ee Deegaanka Dulqabaw, Degmada Horshagax Ee Deegaanka Ilo, Degmada Koonfurta Jigjiga iyo Degmada Waqooyiga Jigjiga Oo Faah-faahin Laga Bixiyay
Jigjiga ( Cakaaranews ) Axad, 28ka February 2016. Sida lawada ogsoon yahay caasimada DDSI ee jigjiga waa ismaamul gooni ah oo leh qaab-dhismeed dhamaystiran oo budgetary ah iyo baarlamaan gaar ah kasokow caasimada DDSI ee ay tahay.
Hadaba waxaa maanta kalfadhiga 2, aad golihiisa 5, aad ee baarlamaanka DDSI oo soo gabagaboobay faah-faahin lagaga bixiyay degmada boodalay ee deegaanka dulqabaw, degmada horshagax ee deegaanka ilo, degmada koonfurta jigjiga iyo degmada waqooyiga jigjiga.
Faah-faahinta ay golaha xildhibaanadu kabixiyeen degmooyinkaas sare kucad ayaa u dhigan sidan:
Waxaa qaab-dhismeed ahaan horay u jirtay degmo la o dhan jiray degmada jigjiga balse waxay maanta baarlamaanka DDSI ay si sharci ah u ansixiyeen inay noqoto degmada koonfurta jigjiga taas oo ay rugteedu noqonayso Shabeelay.
Sidoo kale, degmada waqooyiga jigjiga ee cusub ayay rugteedu noqonaysaa Haroorays. Taas oo kadhigan in Shabeelay ay tahay degmo dhamaystiran oo rasmi ah. Harooraysna tahay degmo rasmi ah oo dhamaystiran sida baarlamaanku maanta ansixiyay. Waxaa intaa dheer, in 20ka xaafadood ee magaalada jigjiga ay hoos imanayaan Mayorka magaalada jigjiga.
Dhanka kale, degmada Boodalay ee deegaanka dulqabaw oo nabadgelyada iyo horumarkaba strategy u ah ayaa waxay kakoobnaan doontaa santarada iyo qabaleeyada kuyaala deegaanka balaadhan ee dulqabaw iyadoo xarunta degmadu tahay boodalay. Tusaale ahaan: qabaleeyada iyo santarada ay kamidka yihiin: duud-fiiq, garaac, waran-dhaab, hadha, fardhiig iyo qabaleeyo kale.
Sidoo kale, degmada horshagax ee deegaanka ilo oo ah deegaan balaadhan oo kamid ahaa meelaha uu nabadiidku dilooday ee hadhaagii nabadiidka ee u danbeeyay laga saaray ayaa waxaa laga sameeyay degmo loogu magac-daray Horshagax iyadoo ay santarada iyo qabaleeyada degmadu kakoobnaan doonaan deegaanka loo yaqaano ilo.waxayna saldhiga degmadu noqonaysaa horshagax.
Iskusoo wada duuboo, afhayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq ayaa sheegay in degmo kasta ay kakoobnaan doonto santaro iyo tuulooyin iyadoo degmadu tahay deegaan balaadhan. balse aysan xarunta oo kali ah degmadu kukoobnayn. Waxaana ansixinta degmooyinka kuxigta in xarunta dhexe ee XDSHSI ay soo diyaariso qorshaha santarada iyo tuulooyinka hoos imanaya degmo kasta iyadoo uu kadibna kabineega deegaanku ansixin doono.
Ugudanbayna, degmada lahel-yucub ayuu saldhigeedu noqonayaa Lahelaw.